Wepamusoro mazana mashanu Emazita Ediki eImbwa: Anonakidza, Akanaka & Matiki Pfungwa - Mazita Embwa
Wepamusoro mazana mashanu Emazita Ediki eImbwa: Anonakidza, Akanaka & Matiki Pfungwa
Une imbwa diki pooch imbwa inoda rimwe remhando dzakanakisa dzeMadiki Imbwa kuenzanisa hunhu hwavo hukuru?
Zvipuka zvidiki zvinowanzove zvine simba rakawanda, kusimba uye nzara, uku uchikwanisa kukwana zvakaringana mukati mehomwe yako - saka unowana zvakanakisa zvepasirese.
Mhando dzakasiyana dzembwa diki vanowanzo kupa akasiyana akasiyana quirks uye maitiro; zvisinei, iwo ese anodikanwa, ane hupenyu uye anogara achikwirana.
Heino runyorwa rwemhando dzakanakisa diki imbwa mazita kunze uko, kusanganisira murume, mukadzi, akasarudzika, anosetsa uye quirky pint-saizi mazano ...
Akanakisa Mazita Ediki eDzimba
Mazita Akanaka Kune Imbwa Diki
Yakasarudzika Madiki Imbwa Mazita
Mapenzi Madiki Imbwa Mazita
Varume Vechidiki Imbwa Mazita
Mukadzi Mudiki Imbwa Mazita
Kusarudza Zita Diki Diki
Nepo iwe uchigona kufunga kuti imbwa hombe ndidzo chete 'dzinoshanda imbwa' kunze uko, mamwe madiki emhando akaitawo mugove wavo wakanaka webasa munhoroondo yese :
Dachshunds aishandiswa kuvhima nekuchera mabheji kuGerman
West Highland Terriers yaizovhima makava muScotland
Bichon Frize akadzidziswa kuita hunyengeri musikisi
Iwe haufe wakambove nenguva isina kujeka kana iwe uine imbwa diki, uye iwe unozoshamisika nekuwanda kwesimba rinogona kurongedzwa mune diki diki furemu.
Iri runyorwa runosanganisira akanakisa madiki imbwa mazita kunze uko, saka ngatitangei ...
Rascal - iro zano rakanakira rechipfuva chidiki chisingaratidzike kunge chinoteedzera mitemo! Rascal izita rakajeka rembwa diki iyo iri cheeky, yakaipa, uye inongowanzoita mhirizhonga panguva dzakanakisa dzenguva!
Yakagara ichikurukurwa kuti madiki canine ari cuter pane makuru, uye kuti imbwa hombe dzinodikanwa kupfuura madiki pooches.
Nepo isu tichitenda kuti imbwa dzese dzinoitwa zvakaenzana zvinoyevedza, zvine hunyanzvi uye zvinodikanwa semumwe nemumwe, kana iwe uchida kuti imbwa yako diki ive nemukana wekurwa mune ino nharo yekare-kare iwe unofanirwa kuvapa iro rakatemwa zita rembwa diki zvinogoneka!
Imwe yeaya mazano mune irongwa pazasi haazokwanise kuramba, sezvo zvakaoma kuona Pomeranian diki anonzi 'Bambi' uye kwete kufa nekuremerwa kuwanda .
Ipo iwo ese moniker angave akajeka kune makuru marudzi, iwo anonyanya akakwana kune diki, pint-saizi imbwa.
Marshmallow - yakakwana kudiki, chena uye fluffy imbwa iyo yakafanana nechando!
Kune anopfuura makumi mashanu emarudzi madiki anozivikanwa nekennel makirabhu, uye zviuru zvembwa diki dzerudzi rumwe nerumwe.
Kuedza kutora risingazivikanwe uye rinonakidza zita rinogona kunge rakaomarara nekuda kwehuwandu hwakawanda hwembwa diki dziri kunze uko.
Kwete kunetseka, isu takufukidza nerunyorwa urwu rweakasarudzika mazano; Kubva kuJapan kuenda kuScotland, isu tine mamoniker kubva kwakasiyana kwakasiyana tsika dzakasiyana, uye kunyangwe zvirinani, ese aya mazita anoreva 'diki' kana 'diki'!
Tine 'maruva madiki' uye 'runako rudiki', pamwe ne'diki asi anotyisa 'uye' murwi mudiki '... nzira huru kutumidza imbwa yako
= ndiko kuvapa moniker inoenderana nehunhu hwavo.
Kohana - zita remusikana akanaka ane mavambo echiJapan zvinoreva kuti 'ruva diki'; yakakwana kune imbwa diki inoyevedza, isina kusimba uye inoyevedza kunge 'ruva diki'
Sezvineiwo, imbwa diki dzinogona kuve dzimwe dzevana vanonyanya kunakidza vatati tambosangana navo, vane simba rakawandisa pamweya uye mweya wakaumbanidzwa kuita diki furemu.
Chihuahuas rudzi runoshamisa rwekusetsa, havatyi kuhukura imbwa kagumi saizi yavo, uye dzimwe nguva unogona kukanganisa hasha uye kushinga kwavo senge kweshumba!
Asi, imbwa idzi dzinotyisa dzinorema zvakapetwa 2kg, uye idiki zvakakwana kutakura dzakatenderera muhomwe.
Imbwa ine hunhu hwakadai inokodzera zita rinosekesa kusimudzira yavo yakajeka comedic genius, uye iwe unowana runyorwa rweanonakidza mazano pano ...
Jabba - rakafemerwa neiyo Star Wars hunhu, Jabba Hut, uyo angangodaro kakapetwa kazana saizi yembwa diki saka inogadzira zita risinganzwisisike uye rinonakidza rembwa diki!
Kunyangwe imbwa yako diki yechirume inombundira chimiro chavo, kana kuzvitenda ivo kuti vakaenzana nekashanu, isu tine zita rinovakwanira pasi.
Hazvina mhosva kuti imbwa yako ingasarudza diki, asi zita rechirume, kana kana vachida zita rinovasiyanisa sembwa yakacheka-cheka mupaki imbwa, isu tine moniker yega imbwa ingazomboda!
Mazhinji eaya madiki mazita embwa akafuridzirwa kubva kune vanozivikanwa uye manhamba mune pop tsika, saka hazvina basa kana mwana wako akaita saThor Odinson kupfuura Ozzy Osbourne kana Freddie Mercury, pane zano rakakwana mune iri runyorwa kune ese mana-makumbo ane makumbo aunosangana nawo.
Bruno - moniker yakapusa, iyo inogona kunge yakakwana kune chero imbwa kunze uko. Zita rekuti Bruno rakabva pazwi rekuti 'brown' muchiGerman.
Mazita Ediki eVarume Imbwa
Archie Kesari Matiyasi
Casper Muvhimi Fergus
by Freddie Rufusi
Hazvina mhosva kuti yako diki hadzi mbwanana inozvizivisa neDisney muchindakadzi kana mukadzi akasimba murwi, isu tine rakakwana zita ravo.
Kune akati wandei mazano mune ino runyorwa ayo anoenderana neakanaka uye ane runako, asiwo akamedzeredzwa uye akapambwa, diki hadzi imbwa, senge Belle, Anna, Elsa, Ariel naJasmine.
Nekudaro, kana imbwa yako hadzi inomiririra iyo Shakespeare quote 'kunyange ari mudiki, anotyisa', saka isu zvakare tine mazita akati wandei akafuridzirwa neakasimba, akashinga uye asingatyi magamba echikadzi, saLara Croft, Hermione Granger naKatniss Everdeen .
Runako - imwe pfungwa yakapusa, iri izwi rinoreva 'akanaka' muchiItaly, saka zvingave zvakanaka kumukadzi wechikadzi anoita misoro kutendeuka paanomhanya nepaki imbwa!
Mazita eVadiki Vakadzi Imbwa
Kokonati Ngirozi Tsangamidzi
Misa mambakwedza Lilly
Jade Zino Cleo
Dora Katniss Runako
Chloe Mazuva Hazel
Mwedzi Rosie Elsa
Princess Diana Jasmine
Mavis Cherry Queenie
Hazvina mhosva kuti mbwanana yako idiki zvakadii, kusarudza iwo musoro wakakwana kwavari kunogara kuri sarudzo hombe, uye kunogona kutyisa dzimwe nguva.
Nekudaro, isu tine mashoma matipi anogona kukubatsira iwe kusarudza rakanakisa zita kune chero diki imbwa:
1. Yakanaka, inosetsa, yakapusa kana yechinyakare?
Kune nzira dzakawanda dzakasiyana dzaungafambe pamusoro pekutumidza imbwa yako dzinovaraidza, uye izvi zvinokanganisa maitiro aunoita iwe nemumwe munhu.
2. Zita rako rakasarudzwa rinofanira kugara kwehupenyu hwese
Ivhareji yehupenyu hwerudzi diki makore gumi nemashanu, ndiwo makore mazhinji auchazofanira kurarama nezita rawasarudza.
3. Fananidza zita rembwa yako diki nehunhu hwavo
Iyi ndiyo tipi yedu yatinofarira, nekuti inoshanda nguva dzese!
Kunyangwe paine mafuremu avo madiki, imbwa diki dzinowanzoita ratidziro huru, uye dzinogona kugara dzichikusiya uchinyemwerera pachiso chako!
Kunyangwe vaine hasha seshumba, kana kuti vachitya segonzo, isu ticharamba tichivada zvakafanana.
Tinovimba iwe unonakidzwa nerunyorwa urwu rwemazita madiki embwa!
Kubva kuDisney machindakadzi kuenda kuGreek ngano manhamba, hapana kushomeka kwekufemerwa kana zvasvika kune mazano.
Dai iwe uine chaunofarira kubva pane urwu runyorwa, saka ive shuwa kutizivisa isu mune zvakataurwa.
Zvakare, kana iwe uine jaya diki diki imbwa iwe, tinoda kuziva kuti zita ravo ndiani!
Maltese Shih Tzu: Unofanirwa kusangana neiyi inonakidza lapdog
Iwe unofanirwa kuona aya mana anopenya eGolden Retriever mavara
chii chinosanganisa imbwa yangu
mhumhi hadzi mazita uye zvirevo
lab german shepherd mix temperament
mufudzi weAustralia musanganise nehusky